KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY : Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra
Mpanao kidnapping miisa fito indray no voasambotry ny Miaramila tao Ambakireny Brieville, ao amin’ny Distrikan’i Tsaratanàna. 2 mars 2021
Naman’i Del Kely sy ny ekipany ireo, raha ny angom-baovao avy amin’ny mpitandro filaminana. Ny sabotsy teo, nanafika tao Beanana ireo andian - dahalo notarihin’ io namany lehibeny io. Lehilahy iray no nentin’ izy ireo an - keriny tamin’ izany ary notakiany vola an - tapitrisany ny fianakaviany ho tambin’ ny famotsorana.
Niroso tamin’ ny fanarahan- dia tamin’ io andro io ihany ny Miaramila avy amin’ ny 322 Ambakireny. Nifankatratra tsy lavitra ny tanàna ny roa tonta ka raikitra ny fifandonana. Votsotra teo am - pelatanan’ ireo mpaka an - keriny ilay takalon’aina iray.
Lavo ny iray tamin’ ireo dahalo ary dimy lahy no voasambo - belona. Tsy nijanona tamin’ ny fahazoana ireo fito lahy ny Miaramila fa nanohy ny diany hatrany mba hahazoana an’ i Del Kely.
Ny alahady teo, vehivavy roa izay olon – dratsy no nosamborin’ ireo mpitandro filaminana. Sarona tany amin’ ireo vehivavy ny basy Kalachnikov iray, basy Mas 36 ary basim - borona iray. Araka ny fanavazana azo dia sakaizan’ ireo dahalo ireo vehivavy nitam - basy. Mbola misy vehivavy roa hafa ihany koa tafaporitsaka niaraka tamin’ i Del Kely. Ity farany dia efa an - taonany no nikarohan’ ny mpitandro filaminana azy satria ny tenany no tompon’ antoka tamin’ ny fakana olona an - keriny nifanesisesy tany Brieville Tsaratanàna.